Burcad badeeda Somalida oo lacag 8 milyan ku xiray siidenyta Markab – SBC
Burcad badeeda Somalida oo lacag 8 milyan ku xiray siidenyta Markab
Koox burcad badeed Soomaali ah oo haysta Markabka MV Iceberg 1 ayaa digniin u diray shirkada Markabkan leh iyo ehelada asxaabtooda ay saran yihiin markabkan taasi oo la xiriirta inay dili doonan Badmaaxiinta hadii aann la siin lacag madax furasho oo aad u badan
Burcad badeeda ayaa waxaa ay dalbadeen lacag dhan $ 8 Million inay ku siideyn doonan Markabkaas iyo shaqaalaha saran oo gaaraya 24 badmaax oo u dhashay dalalka kala duwan oo caalamka ah kuwaasi muddo sannad ka badan gacanta ugu jira burcad badeeda Soomaalida.
Markabka MV Iceberg 1 waxaa ay kooxaha Burcad badeeda Soomaalida ay ka soo afduubteen xeebaha dalka Yemen bishii March 2010 waxaana tan iyo xilligaas ay ku hasytaan xeebaha soomaaliya iyaga oo ku adkeysanaya in la siiyo lacag dhan $8 Milyan.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Shirkada Markabka leh oo laga leeyahay wadanka isku taga Imaaraadka Carabta oo ku aadan siideynta Markabkooda iyo shaqaalaha la socda.
Qaar ka mid ah ehelada dadkooda lagu dul haysto Markabka MV Iceberg 1 ayaa ka dalbaday dowladahoda in ay xooga saaraan sidii loo siideyn lahaa Dadkooda oo xaalad khatar ah ku jira muddo sannad ka badan oo ay gacanta ugu jiraan Burcad badeed Soomaali ah.
Badmaaxiinta Markabkan la socda ayaa ka soo kala jeeda Yemen, India, Ghana, Sudan, Pakistan iyo Philippines ayaa xaaladooda ay tahay mid liidata iyadoo ay dhamaan ka go’anyihiin adeegyada Muhiimka ah ee sida cunta iyo shidaalka.
Dowlada Ghanna oo ay muwaadiiniin ka saran yihiin markabkan ayaa sheegtay inay amuurtaasi ay ka qaadan doonto kaalin muhiim ah gaar ahaan sidii ay burcada uga siideyn lahayd Muwaadininteeda.